Anti-WannaCry Mazano Kubva kuSemalt Expert
Mazuva mashomanana adarika, zvimwe zvikamu zve-malware zvakarova web uye zvakapinda makombiyuta akawanda mukati memaminitsi. Vakatora zvinhu zvose kubva kune mawebsite webhupfumi kuenda kuNational Health Services yeUnited Kingdom. The software inonzi WannaCry ndiyo inonzi mukurumbira. Icho chirwere chetachiona chinopinda mumakombiyuta ako pachako uye chinokuvadza nhamba huru yefaira - grain temperature and moisture content. Iyo inovhara mafaira pafoni yako uye inogumira kuwana kwako. Vakasika vechirware iyi vanovhara kombiyuta yako kusvikira iwe uchibhadhara rudzikinuro. Havadi kuzarura data yako, uye iwe unofanira kubhadhara mari yavo mukati memazuva mashoma.
Inoratidzika semutambo wekutanga weWannaCry kurwisa kwapera, uye kune mikana yokuti vashandi vachabvumira zvakare iyi malware mumavhiki anotevera. Vanotarisira kuba mari yako pachako uye mari, uye haagoni kukubvumira kuti udzivise majekiti awo chero ipi zvayo.
Andrew Dyhan, Mutungamiriri weKutengi Achibudirira Semalt , anotsanangura mazano ekudzivirira chirongwa ichi uye zvaunogona kuita kuti ugare wakachengeteka paIndaneti.
Chii chinonzi Rudzikinuro?
Ngatitangei nemashoko ekutanga. Ransomware inzira yeupombwe uye inokonzera kombiyuta yako..Iyo inokuvhara iwe uye inobatanidza mafaira mukati memaminitsi mashomanana. Vaseki vanoda kuti iwe ubhadhe mari shomanana. WannaCry inoshandisa nzira dzakasiyana-siyana dzeMicrosoft Windows dzekushandisa kurwisa zvigadzirwa zvakasiyana. Nyaya yekutanga yakabvunzwa mwedzi yakapfuura apo vanyengeri vaiti vanyengeri vakati vakaparadza zvirongwa zveNational Security Agency. Kana mishonga yako ichibatwa uye iwe ukaramba kubhadhara rudzikinuro, iwe unofanirwa kutaurira kumifananidzo yako yega, mafaira emitero, uye mamwe mashoko kwemakore.
Iyo inobva kupi
Rudzikinuro nderimwe remhosva dzinonyanya kuzivikanwa uye dzine ngozi dzepabonde. Vanyengeri vanoda kuti iwe ubhadhe mari kuburikidza neBitcoin, asi mitemo yayo yakashandurwa munguva pfupi uye yakashandura-kushandiswa kwevashandi kuti vaone vatadzi vanobva mavariro avo. Zvose mapoka ayo akavakwa pamwechete kuti aumbe purogiramu chaiyo iyo inotengeswa paIndaneti sezvigadzirwa zvekare zvekare. Vavengi vanotenga mapurogiramu uye vanoisa. Makombiyuta avo emakombiyuta anotapukirwa pasina nguva.
Maitiro evatengi vanokuwana sei
Mhombwe kana vatengesi vanokwanisa kuwana kombiyuta yenyu kuburikidza ne-malware uye virusi software. Rudzikinuro haruwaniki pamakombiyuta ako kamwe-kamwe 'iwe wadzikunura kubva pawebsite uye hauna pfungwa yekukuvadza kwayo.
Utachiona uye hutachiona hunopinda makombiyuta yako paunenge uchinyora pamafasiteti e-pop-up. Vachikuvadza, kune rumwe rutivi, vanogona kuwana maitiro ako uye vanokukonzera zvinetso zvakakomba kwauri. Vanowanzokutumira mazwi anoshamisa kuburikidza ne emails kuitira kuti iwe unogona kudhinda zvinyorwa zvadzo kana mazamu awo. Vatambudzi vanozoona nzvimbo yako uye vanokumbira kubhadhara rudzikinuro nokukurumidza. Mavhiki mashomanana adarika, varoyi vakaputsa masangano eDeutsche Bank muGermany. Cybercriminals vari kushanda paIndaneti maawa ose. Saka kana iwe uchida kunakidzwa nekutenga paIndaneti, haufaniri kusarudza chero chimwe chinhu kunze kweDHL uye FedEx kutumira.